Ama-7pcs amahle kakhulu we-Mini Makeup Brush Set amahle kakhulu China Manufacturer
Incazelo:I-Mini Makeup Brush Isethi,I-Flat Top Makeup Brush,Blush Makeup Brush
Home > Imikhiqizo > Setha ukusetha > I-7pcs Isethi Yebhashi > Ama-7pcs amahle kakhulu we-Mini Makeup Brush Set amahle kakhulu
I-Model No.: YCM001
Ukuthutha: Ocean,Air,By Express
WE-Powder + BLUSH + ConceralER + Chaza + I-HIGHLIGHTER + I-brashi ehlanganayo + I-Eye SHADOW
Ama-7pcs amahle kakhulu we-Mini Makeup Brush Set amahle kakhulu Sebenzisa isibambo sezinkuni esiluhlaza okwesibhakabhaka, nesigaxa se-aluminium, i-100% eco-friendly grey ngezansi, isihlalo esimhlophe se-Nano wire hair.
Amabhulashi athambile, athambile futhi a-fluffy
Blend powder blush ngokulinganayo ukuze ubukeke ubukeka bemvelo
Imifushane emifushane, emincane
Ungqimba kanye nokuxubanisa ukhilimu kanye nama-eyeshadows e-powly ngokulinganayo ku-corase yeso
Amabhulashi athambile naluhlaza
Thela ekugqanyisweni noma ekusetshenzisweni kwempuphu ngokuqondile ukuze kukhanye ukubukeka kwemvelo
Ibhulashi le-angled elisicaba lifanela kuzo zonke izindawo zobuso. Iphelele kakhulu lapho isetshenziselwa ukufaka isicelo sokufihla ukucasha ngaphansi kwemibuthano yamehlo nezimpawu, ubomvu nokunye ukungapheleli kwesikhumba ekhaleni.
Iphelele ngokudala ukuqeda ngisho nesisekelo samaminerali noma i-powder ethe xaxa.
Kuhle ukusebenzisa i-powder ethe xaxa noma ukususa umkhiqizo owengeziwe noma kuphi ebusweni bakho.
Ibhulashi elihlosiwe le-buffs futhi lixube isikhumba esikhumbeni ukuze kusulwe imibuthano emnyama, izisihla, ubomvu nokunye ukungapheleli kwesikhumba. Ingase futhi isetshenziselwe ukugqamisa kahle futhi umise ikhala, izihlathi kanye nezindawo zomugqa womhlathi.
Izici Zomkhiqizo: I-100% Engenacala
1.Paka ikhanda lokuxubha emanzini afudumele wesepha wokugeza.
2.Umabhulashi owenziwe ngezinwele zemvelo, ungasebenzisa i-shampoo engathathi hlangothi ukuhlanza. (Thatha enye i-Shampoo ngesandla sakho, bese usula ibhulashi. , bese uyigeza bese usebenzisa izicubu ukuze isomile kancane.Izinhlungu zinaka, ungasinciphisi, unciphise ibhulashi lize lome ngokuphelele.Ungaligcini libheke phansi ukuze lome, uma kungenjalo kuzolimaza.
I-Mini Makeup Brush Isethi I-Flat Top Makeup Brush Blush Makeup Brush